प्लास्टिकको बारे उपयोगी जानकारी हरियो नवीकरणीय
El प्लास्टिक आज यो दैनिक जीवनमा र दशकौं देखि उद्योग मा हजारौं अनुप्रयोगहरूको लागि सबैभन्दा धेरै प्रयोग भएको सामग्री मध्ये एक हो।
प्लास्टिक १ 1860० को वरिपरि सिर्जना गरिएको थियो तर यसको प्रयोग १ 1930 .० को दशकमा शुरू भयो।
सिंथेटिक प्लास्टिकको विशेषताहरु छन् कि यो सामग्री लोकप्रिय बनायो: यो उत्पादन गर्न सस्तो छ, यो कम घनत्व छ, यो जलरोधक, लचिलो छ, यो विद्युतीय इन्सुलेट छ, यो प्रतिरोधी छ र यो सबै प्रकारको प्रयोग लाई अनुकूल बनाउँछ।
प्लास्टिकको उत्पादन धेरै प्रदूषणकारी हुन्छ विशेष गरी जब यो जलाइन्छ, केही प्रकारको प्लास्टिकहरूको रीसायकल गर्न सजिलो हुन्छ तर अरू।
२०१० मा प्लास्टिकको विश्वव्यापी खपत २ 2010० मिलियन टन थियो र अझै वृद्धि भइरहेको छ।
पारम्परिक प्लास्टिक यसको निर्माणको लागि प्रयोग गरिएको सामग्रीको प्रकारमा निर्भर गर्दै १००, 100०० र १००० वर्षसम्म लिन सक्दछ।
पारम्परिक प्लास्टिकको प्रयोग पेट्रोलियम र यसको निर्माणको लागि डेरिभेटिभहरू ताकि यो धेरै प्रदूषणकारी छ, साथै थप धेरै ऊर्जा यसको विस्तार मा।
प्लास्टिकको फोहोरले to० देखि %०% फोहरलाई समुद्र र समुद्रको छेउछाउ संसारभरि फेला पार्दछ।
यस्तो अनुमान गरिएको छ कि विश्वमा प्रत्येक वर्ष १ अरब प्लास्टिकको झोलाहरू उपभोग गरिन्छ, र त्यसपछि तिनीहरू अधिकांश फोहोर बन्छन्, किनकी ती छैनन्। बायोडिग्रेडेबल.
त्यहाँ प्लास्टिक को एक विस्तृत विविधता छ कि सामान्यतया सबै प्रकारका वस्तुहरुमा प्रयोग गरीन्छ। केहि सबैभन्दा धेरै प्रयोग हुने पोलीस्टीरिन, पोलीप्रोपाईलिन, Polyurethane, PVC, PET, polyamide, अरूलाई हो।
परम्परागत प्लास्टिकको विभिन्न बनावट, कठोरता र भौतिक अवस्था हुन सक्छ किनकि यो फोम, कडा सामग्री, नरम, आदि हुन सक्छ।
अन्तमा, प्लास्टिकलाई एक समय आधुनिक सामग्री मानिन्थ्यो जसले विभिन्न समस्याहरूको समाधान गर्थ्यो र हजारौं अनुप्रयोगहरू थिए। तर दशकहरु बितेको साथ यसले लाभहरू प्रदान गरेको छ तर यसले प्रदूषण पनि उत्पन्न गर्दछ र ग्रहमा प्रशस्त फोहोर उत्पन्न गर्दछ।
वर्तमानमा, पारम्परिक प्लास्टिकहरू अब मानव स्वास्थ्य र वातावरणमा नतिजाको कारण राम्रो सामग्री मानिदैन।
लेखको पूर्ण मार्ग: हरियो नवीकरणीय » वातावरण » प्लास्टिकमा उपयोगी जानकारी
येनिफर भ्यालेन्टिना सलास ड्यूक भन्यो
के सुन्दर जानकारी
यनिफर भ्यालेन्टिना सलास ड्यूकलाई जवाफ दिनुहोस्
कार्ला पाओला भन्यो
यो जानकारीले मलाई मेरो होमवर्कको लागि धेरै मद्दत गर्‍यो मैले १० पाएँ
कार्ला पावलालाई जवाफ दिनुहोस्
मिरियम लुना भन्यो
जानकारी पुनः लिएका
मिरियम लुनालाई जवाफ दिनुहोस्
पुनः कोडा जानकारी मलाई आशा छ होमवर्कमा राम्रो हुनेछ
जानकारी राम्रो छ, मैले कार्यमा १० प्राप्त गरे
ilul 2002 भन्यो
यसले म र मेरो साथीलाई काम गर्न सक्षम हुन मद्दत पुर्‍यायो
Ilul2002 लाई जवाफ दिनुहोस्
के राम्रो जानकारी
जानकारीको लागि धन्यबाद, म आशा गर्छु कि मैले १० काममा पाउनेछु! अग्रिम धन्यवाद, किनकि यसले मलाई धेरै मद्दत गर्‍यो ..
Ortho hdp को लागी कत्ति गाह्रो काम थियो म तपाईको आमाको खोलको उल्लंघन गर्दछु
मलाई जानकारी मन पर्यो